Semalt: Iyiphi indlela ephumelele kakhulu yokukhupha okuqukethwe kwiwebhusayithi?
Ukuchithwa kwedatha yinkqubo yokukhipha okuqukethwe kwiwebhusayithi isebenzisa izicelo ezizodwa. Nangona i-data scraping izandile njengegama lobuchwepheshe, lingaqhutyelwa ngokulula ngesixhobo esisetyenziswayo okanye isicelo.
Ezi zixhobo zisetyenziselwa ukukhipha idatha oyifunayo kumaphepha athile ewebhu ngokukhawuleza njengoko kunokwenzeka. Umatshini wakho uya kwenza umsebenzi wakhe ngokukhawuleza kwaye ungcono kuba iikhomputha ziyakwazi ukubonana phakathi kwemizuzu embalwa kungakhathaliseki ukuba zinkulu kangakanani iinkcukacha zabo.
Ngaba uye wafuna ukuvuselela iwebhusayithi ngaphandle kokulahlekelwa ngumxholo wayo? Ubhedu bakho obuhle kukucoca yonke into kwaye uyigcine kwifolda ethile. Mhlawumbi yonke into oyifunayo yisicelo okanye isoftware eyenza i-URL yewebhusayithi, iyakraba yonke into kwaye iyisindisa kwifolda ekhethwe ngaphambili.
Nalu uluhlu lwezixhobo onokuzama ukufumana oluya kuhambelana nazo zonke iimfuno zakho:
2. Sebenzisa "Gcina njenge"
Ungasebenzisa inketho ethi "Gcina njenge" kukho nawuphi na iphepha lewebhu. Iya kulondoloza amaphepha malunga nawo wonke umxholo weendaba. Ukusuka kwisiphequluli se-Firefox, yiya kwiThuluzi, uze ukhethe Ulwazi lwekhasi uze uqhafaze iMedia..Kuya kuphuma uluhlu lwawo onke amaphephandaba ongawalayisha. Kufuneka ukhangele kwaye ukhethe abo ufuna ukukhipha.
3. I-GNU Wget
Ungasebenzisa i-GNU Wget ukubamba i-website yonke kwi-blink yesiso. Nangona kunjalo, esi sixhobo sinempendulo encinane. Awukwazi ukuwasebenzisa iifayile zeCSS. Ngaphandle koko, iyakwazi ukuhlangabezana nayo nayiphi na ifayile. Ilayisha iifayile ngeFTP, HTTP, kunye ne-HTTPS.
4. I-HTML DOM Parser
I-HTML DOM Parser enye ithuluzi lokucoca elincinci elingakunceda ukuba uphuphe yonke into esuka kwiwebhusayithi yakho. Unamanye amaqela athile asondeleyo afana ne-FluentDom, i-QueryPath, i-Zend_Dom, kunye ne-phpQuery, esebenzisa iDOM esikhundleni se-String Parsing.
Esi sikhokelo singasetyenziselwa ukutshiza yonke into yewebhusayithi yakho. Qaphela ukuba ukukhutshwa komxholo akuwona msebenzi walo kuphela, njengoko ungasetyenziselwa ukuvavanya ngokuzenzekelayo, ukubeka iliso, ukuchithwa kwedatha kunye nokukhwela kwewebhu.
6. Se benzisa umyalelo owenziwe ngezantsi ukutshiza umxholo wewebhsayithi yakho phambi kokuba uyikhuphe:
file_put_contents ('/ ezinye / ulawulo / scrape_content.html', file_get_contents ('https://google.com'));
Kufuneka uzame ngalinye lezinto ezikhethiweyo apha ngentla, njengoko bonke baneenkalo zabo ezinamandla kunye nezibuthathaka. Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukukhangela inani elikhulu lewebhusayithi, kungcono ukubhekisela kwiingcali ze-web scraping, kuba ezi zixhobo zingenako ukukwazi ukujongana nale miqulu.